Mogadishu Journal » 2017 » November » 19
Madaxweyne Farmaajo oo u kicitimay Imaaraadka Carabta
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi farmaajo ayaa maanta u ambabaxay dalka Imaaraadka Carabta, halkaasi oo uu kula kulmi doono madaxda dalkaasi. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee Madaxweyne Farmaajo iyo masuuliyiinta Imaaraadka ay ka...
Hogamiye ka tirsanaa Al-shabaab oo baxsaday
Mjournal :-Saraakiil ka tirsan dowladda Kenya ayaa sheegay Hoggaamiyaha Al Shabaab u qaabilsan dalka Kenya Axmed Imaan Ali inuu doonayo ka bixista Ururkaasi. Wargeyska The Standard ee ka soo baxa dalka Kenya oo soo xiganaya Saraakiil ka tirsan Sirdoonka dalka Kenya, ayaa wuxuu...
Madaxda Hirshabeelle oo isku mari la magacabista gollaha wasiirada
Mjournal :-Madaxweynaha Hirshabelle oo kulan la qaatay Kuxigeenkiisa iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka ayaa dhoor mar isku fahmi waayay magacaabista Golaha Wasiirada, waxaana khilaafka xoogiisa ka taagan yahay tirada Wasiirada laga dhigayo. Madaxda Hirshabelle ayaa sidoo kale isku ...
Imaaraadka oo lagu eedeeyay in uu hubeynayo maamulada ka jira Soomaaliya
Mjournal :-Qaramada Midoobey ayaa ku eedeeysay Dowladda Imaaraadka Carabta in ay jabisay Cunaqabateynta Hubka ee Saaran Soomaaliya. Warbixin kasoo baxday Qaramada Midoobey ayaa lagu sheegay in dowladda Imaaraadka ay si sharci daro hub uga iibisay maamulada dalka ka jira Qaarkood...
Egyptian President Abdel-Fattah el-Sissi, for the second time in as many days, has delivered a stern warning to Ethiopia over a dam it is building after the two countries along with Sudan failed to approve a study on its potential effects. Ethiopia is finalizing construction of...
The UAE is violating internationals sanctions on the sale of arms to war-torn countries by supplying Somalia weapons, a UN report has revealed. According to monitors, the continuous support of some foreign countries for terror in Somalia threatens peace and security due to the...
Mugabe oo lagu qancinayo wali in uu xilka ka dego
Mjournal :-Labo kulan oo xasaasi ah ayaa maanta la filayaa in ay dalka Zimbabwe ka dhacaan, si go’an looga gaaro mustaqbalka Madaxweyne Mugabe. Saacadaha soo socda Mr Mugabe waxa uu la kulmi doonaa madaxda ciidamada la wareegay awoodda dalkaasi. Kulamadani ayaa la filayaa...
Xildhibaannada Soomaaliya oo canshuur laga qaadayo
Mjournal :-Xildhibaanada Golaha shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu soo rogay canshuurista Gunnada ay qaataan, taasoo noqoneysa markii u horeysay ee Xildhibaanada laga qaadi doonto canshuurta ku waajibtay. Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya...
Masar oo ka hadashay arrintan biyah Wabiga Nile ka
Mjournal -Madaxweynaha dowladda Masar ayaa sheegay in dowladiisa aysan aqbali doonin in dowladda ay Itoobiya ay leexsato wabiga Biyaha Nile, oo labadal ay ku muransan yihiin. Waxaa uu sheegay in shacabka Masar ay diyaar u yihiin in ay iska difaacaan cidkaste oo kusoo duusho, una...
Madaxweyne Farmaajo oo ku sii jeeda maanta dalka Iskutaga Imaaraadka Carabta
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo iyo Wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta lagu wadaa in ay safar ku tagaan Dalka Imaaraatka Carabta. Safarka Madaxweynaha Soomaaliya maanta ku tagayo dalka Imaaraaka Carabta ayaa noqonaya kii labaad uu...